Microsoft ayaa qorsheyneysa Qorsheeye ku shaqeeya IOS si aad si fiican isku abaabuli karto | Wararka IPhone
Microsoft waa shirkadda boqoradda ee otomaatiga xafiiska iyo wax soosaarka, waqtigan xaadirka ah taariikhda kuma qasan karno diidmada caddaynta astaamahan. Tusaale cad oo kani waa dhammaan qaybta Microsoft Office, iyo sidoo kale codsiyada ka soo jeeda qaabka Qorsheeyaha. Naxariista nidaamkan maareyn ayaa ah inaan la heli karin ilaa goor dhaweyd laga helay App-ka App Store. Qorsheeyaha ayaa si buuxda looga heli karaa macruufka App Store dhowr toddobaad runtuna waxay tahay inay u shaqeyso si cajiib ah. Abaabulka shaqadaada kooxeed waligeed kama fududaan kahor imaatinka Qorsheeyaha, oo doonaya inuu hor istaago waxyaabaha kale ee la midka ah sida Trello ama Slack.
Waa maxay qorsheeye? Waxaan horayba u kashifnay sirta, oo la socda Qorsheeyaha waxaad awood u yeelan doontaa inaad u abaabusho wada-shaqeyn qaab fudud oo muuqaal ah, oo aad ku abuureyso nidaamkaaga hawsha hawshaada iyo hab aad ku wadaagi karto faylasha Sidan ayaan si dhakhso leh oo fudud ula xiriiri karnaa asxaabta isla markaana aan ula socon karnaa horumarka shaqada laga hadlayo.
Qorshe kastaa wuxuu leeyahay guddi u gaar ah, halkaas oo aad ka abaabuli karto hawlo baaldiyo. Hawlaha waad u kala saari kartaa hadba heerka ama isticmaalaha loo xilsaaro. Si aad u cusbooneysiiso xaaladda ama aad u beddesho shaqooyinka, waa inaad jiideysaa oo aad hoos u dhigeysaa howlaha u dhexeeya tiirarka, dhammaantood waxaad ku lahaan doontaa hal meel, kuma tiirsanaan doontid noocyada kale ee codsiyada. Sidee bay noqon kartaa haddii kale, Qorsheeyaha wuxuu leeyahay nidaam ogeysiis ah oo naga ilaalin doona si buuxda u feejignaan. IYOWaxa kaliya laakiin waa in codsigan uu unoqon doono mid si buuxda waxtar ugu leh adeegsadayaasha haysta rukunka Microsoft Office 365.
Culeyskiisu waa 59 MB oo keliya waana la jaan qaadi karaa qalab kasta oo macruufka ah oo ka sarreeya iOS 9. Waxaa loo tarjumay luuqado aan tiro lahayn, ujeedadeeduna waa in runti la istaajiyo Trello iyo Slack.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Microsoft ayaa qorsheyneysa Qorsheeye ku shaqeeya IOS si aad si fudud ugu abaabuli karto
Sony waxay sii wadaa heshiiskeeda Apple waxayna soo saari doontaa dareemayaasha kamaradaha